Costa Rica inotambanudza runyorwa rwenyika dzinobvumidzwa kushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Costa Rica Kupwanya Nhau » Costa Rica inotambanudza runyorwa rwenyika dzinobvumidzwa kushanya
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Costa Rica Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
PaAugust 1, 2020 Costa Rica yakavhura nhandare dzenyika dzese: Juan Santamaría International Airport, Daniel Oduber Quirós Airport, uye Tobías Bolaños Airport.
Rondedzero yenyika dzakabvumidzwa kupinda dzinoongororwa nguva nenguva uye zvichibva pane yazvino kugadzirisa rondedzero yakawedzerwa seinotevera:
• Nyika dzakabatana
• Chammhembe Koria
Kutanga Gunyana 1, vagari venyika nhanhatu dzeUnited States of America vachakwanisa kushanyira Costa Rica:
Costa Rica International Airport parizvino yakavhurwa vashanyi kubva:
Iberia uye Lufthansa kutobhururuka mukati.
Air Canada inotangazve nendege munaGunyana 12.
Air France inotangazve nendege Gumiguru 14.
• Vashanyi vanofanirwa kupedzisa nekupa ongororo yezvirwere.
• Vashanyi vanofanirwa kupa humbowo hwehutachiona hwePCR coronavirus bvunzo. Mhedzisiro yacho inofanirwa kunge yakagamuchirwa mukati memaawa makumi mana nemasere vasati vaenda kuCosta Rica.
• Vashanyi vanofanirwa kuwana inishuwarenzi yekufamba iyo inovhara kurapwa kana kutarisirwa kusingatarisirwi kwekugara. Vashanyi vanofanirwa kutevera zvese nhandare yendege nemaitiro emunharaunda ehutano. Izvi zvinosanganisira kupfeka masiki kana kumeso nhovo mune dzese mamiriro emumba
• Vashanyi vanobva kuUnited States of America vanofanirwa kuratidza humbowo hwekugara kwavo mune imwe yenyika nhatu dzakabvumirwa kuburikidza nerezinesi ravo rekutyaira.